Andres Iniesta oo filaya in Xavi uu qaban doono shaqada Tababarenimo ee Kooxda Barcelona – Gool FM
Haaruun September 23, 2021
(Barcelona) 23 Sebt 2021. Halyeyga Kooxda kubadda cagta Barcelona ee Andreas Iniesta ayaa rajaynaya in laacibkii hore ee khadka dhexe ay kawada ciyaari jireen ee Xavi uu ugu dambayn noqon doona tababaraha cusub ee kooxda Barca mustaqbalka.
Xavi ayaa la rumeysan yahay inuu ka mid yahay musharraxiinta ugu horreeya ee liiska shanta nin ee la la xiriirinayo kooxda reer Catalan si ay beddel ugu noqdaan tababaraha hadda ee Ronald Koeman, haddii ay go’aansadaan inay shaqada ka cayriyaan tababaraha reer Holland.
41-sano jirkaan ayaa baranayey habka koox loo maamulo tan iyo 2019-kii, isagoo tababare u ahaa kooxda reer Qatar ee Al Sadd, Iniesta ayaana rumeysan in saaxiibkiisii hore ee reer Spain uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabada xigta ee xirfaddiisa tababarenimo.
“Waxaan filayaa inuu isagu diyaar u yahay, haa. Haddii aad i weydiiso haddii aan sawiranayo Xavi oo keydka Barca fadhiya, waxaas oo dhan waxaa ugu wacan inuu isku diyaarinayay oo uu u tababarayay sidii uu macallin ugu noqon lahaa Barca, wuxuu leeyahay kalsooni uu ku qaadan karo loollankan.” Iniesta ayaa sidaas u sheegay Wargeyska SPORT.
Xavi iyo Iniesta ayaa wadar ahaan labaduuduba waxa ay u safteen Barcelona 1,441 kulan tartammada oo dhan, waxaana ay kula guuleysteen todobo horyaalka La Ligaha Spain ah iyo Afar Champions League.